सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कौशल विक्रेताहरूले सिक्नु पर्छ Martech Zone
मेरी श्रीमतीले अन्ततः उनको-बर्षे पुरानो ल्यापटप प्रतिस्थापन गर्ने मौका पायो, जसले Brother० को दशकको अन्तदेखि यती छिटो मात्र होइन, भाई वर्ड प्रोसेसर जस्तै काम गर्न थाल्छ। यो 8१२ एमबी र्याम, र MB० एमबी र्याम हार्ड ड्राइभको साथ डेल थियो। यो ढिलो, अस्थिर थियो, र क्र्याक-अप ह्यान्डल अगाडिको भाग छोडेको थियो। उनी बेस्ट बायबाट स्यामसंग नेटबुक किन्छिन्।
ठीक छ, यो धेरै ब्लग-योग्य छैन, तर वास्तवमा यसमा पाठ छ।
किनकि हामीले बेस्ट बायलाई पहिलो स्थानमा हेरेनौंनौं।
एक उत्साही gearhead को रूप मा, म फ्राई को मन पर्छ। उनीहरूसँग फिल्म र संगीत चयन बेस्ट बायको छैन, तर उनीहरूले तपाईंलाई कल्पना गरेको भन्दा बढी इलेक्ट्रोनिक्स पाए। अमीशले पनि सधैं केहि किन्नेछ। के उनीहरूले थाहा पाएनन् कि उनीहरूले यूएसबी संचालित किबोर्ड वार्महरू बनाए? मैले या त गरेन, तर यदि उनीहरूले यो बुझे भने, म यो किन्छु। र तिनीहरूले शायद यो मिल्यो।
त्यसैले मैले मेरी श्रीमतीलाई फ्राइको ल्यापटप सेक्सनमा लगे, उनले केही अनुसन्धान गरेपछि पैट्रिक वेल्चको वेबसाइट, र देखायो कि नेटबुकले उनको लागि के गर्न सक्दछ। किनभने उसको धेरै सामग्री अनलाइन थियो, र किनभने उनी पर्याप्त मोबाइल छन्, नेटबुक उनको लागि सबैभन्दा राम्रो विकल्प थियो।
हामीले १२ भन्दा बढी विकल्पहरू हेरेर उनी थोरै निराश भएकी थिइन, किनकि त्यहाँ उनीहरूको बीचमा कुनै भिन्नता छैन, मूल्य बाहेक।
हामीले यस क्षेत्रका एक जवान विक्रेतालाई झण्डा लगायौं, र Toni उसलाई चाहियो के भन्यो। "म कुनै पनि बीच ठूलो भिन्नता बुझ्न सक्दिन?"
"तपाइँ नेटबुक चाहनुहुन्न," बिक्री बच्चामा रोकियो। "तपाइँ एक ल्यापटप चाहानुहुन्छ।"
"किनभने एक ल्यापटप ठूलो छ, अधिक सामान होल्ड, र तपाईंलाई संगीत र फोटो भण्डार गर्न दिन्छ।" (यो सहि छ, एक महिला जसले कम्प्यूटर चाहान्छ केवल बच्चाहरू र उनको जोश ग्रुबिन पाइलेट्स वर्कआउट प्लेलिस्टहरूको फोटोहरू भण्डारण गर्नु पर्छ।)
बजेट सीमित थियो, त्यसैले हामी $ 300 को लागी केहि खोज्दै थियौं। ल्यापटपहरू $ 500 र अधिक थिए।
हामीले भनेका थियौं कि हामी यसको बारेमा सोच्दछौं, र स्टोरको वरिपरि हिंड्यौं, जबकि मेरी श्रीमतीले कसरी मान्छेले आफूले चाहेको कुरा सुन्न कष्ट गरेन भनेर कसरी पत्ता लगाए। मैले उसलाई फेरि पछाडि जान र फेरि एक चोटि प्रयास गर्दा कुरा गरें। हामीले एक पुरानो केटालाई झण्डा लगायौं, जसले कम्तिमा उनलाई उनको मूल प्रश्न समाप्त गर्न दिईन्।
"मैले बुझें कि एक नेटबुक अपील गरीरहेछ, तर तपाईले ल्यापटपको बारेमा सोच्नु पर्छ," उनले अन्तमा भने।
“हेर,” मैले केटलाई भने, “म दिनभरि, हरेक दिन अनलाइन खर्च गर्छु, र म ल्यापटप प्रयोग गर्छु। मलाई थाहा छ उनको कम्प्युटर बानी के हो, र मलाई थाहा छ कि उनलाई वास्तवमै नेटबुक चाहिन्छ। ”
तर त्यो मान्छे अडिग रह्यो। उसले हामीलाई $ 600 ल्यापटपमा तान्ने प्रयास गर्यो। "ब्लाह ब्लाह ब्लाह संगीत, ब्लाह ब्लाह ब्लाह फोटोहरू," उनले भने। हामीले उसको समयको लागि धन्यवाद दिएका थियौं।
निराश, र "क्रिसमस भ्याकेसन" मा चेवी चेजको सम्झना दिलाउने एक राम्रो स्वस्थ रेन्ट पछि, मेरी श्रीमतीले बेस्ट बाय एक प्रयास गर्ने निर्णय गरे। हामीले भर्खरै अर्को फ्राईको ग्राहकबाट सुनेका थियौं कि बेस्ट बायकोसँग फ्राई भन्दा धेरै कमको लागि त्यस्तै नेटबुकहरू छन्? कम्तिमा २ couple% एक जोडी केसमा।
म घर गए र कोल्ट्स खेल हेरे, र एक घण्टा पछि, टोनी आफ्नो ब्रान्ड नयाँ स्यामसंग नेटबुकको साथ घर आई, जुन उनको मूल बजेटमा राम्रोसँग आयो। यो एक Fry गरेको मा उस्तै मोडेल भन्दा $ 50 कम थियो, र यो केहि अतिरिक्तको साथ आयो।
“म भित्र गइनँ, केटालाई के चाहियो भनेर बताएँ र कुन मोडेल छान्ने भनेर उसलाई सोधें। उनले यसलाई सिफारिस गरे र यो किन राम्रो छनौट भएको भनेर वर्णन गरे र मैले किनें। ”
सरल, पीडा रहित, र छिटो।
फ्राईको बिक्री साथीहरूमा म धेरै निराश थिएँ। तिनीहरूले कम प्रयासमा नेटबुक बेच्न सक्थे। यसको सट्टा, तिनीहरूले आफ्नो ग्राहकको कुरा सुनेन, तिनीहरूले आफ्नै प्राथमिकताहरू धक्का दिए? दुई पटक! ? र बिक्री हरायो।
यद्यपि, सर्वश्रेष्ठ खरीद्ने मान्छेले सुन्नुभयो, प्रश्नहरूको उत्तर दियो, र कम्प्यूटर बेच्नुभयो। कुनै ठूलो कुरा हैन, म स्वीकार गर्छु, तर उसले १० मिनेट भन्दा कममा in २ .० बिक्री गर्‍यो। त्यो एक hour १$०० प्रति घण्टा ROI हो।
यो आधारभूत पाठ हो कि जसले अरू व्यक्तिलाई उत्पादन वा सेवाहरू बेच्छ: तपाइँको फ्रिगजिन ग्राहकहरू सुन्नुहोस्। केवल ती धारणा के नराख्नुहोस् जुन उनीहरूले चाहान्छन् सबै गलत छ, र तपाइँ अझ राम्ररी जान्नुहुन्छ। कम से कम तिनीहरूको कारण सुन्न समय लिनुहोस्, र हेर्नुहोस् कि वास्तवमै तिनीहरू के चाहन्छन्। उनीहरूलाई सोध्नुहोस् कि यदि उनीहरूले तपाईंको विकल्पलाई वैकल्पिकको रूपमा हेरेका छन्, र यदि उनीहरू यसलाई चाहँदैनन् भने, उनीहरूलाई जबरजस्ती आफैंलाई खरीद गर्न बाध्य नगर्नुहोस्।
यदि फ्राईको बिक्री साथीहरूले यो गरेका भए, उनीहरूले मेरो श्रीमतीलाई चाहिएको वा चाहिएको एक नेटबुक भएको थाहा पाए हुन्थ्यो, र तिनीहरूले सुनेरै उनीप्रति वफादारी कमाउन सक्दछन्। र यदि उनी कहिले निर्णय गर्छिन् कि उनलाई ल्यापटप चाहिन्छ भने, उनी त्यो व्यक्तिबाट किन्नेछन् जसले उनलाई पहिलो पटक गरेको थिए।
के हामी फ्राईमा फर्किनेछौं? हुनसक्छ उनीहरूसँग राम्रो सामानहरू छन्। के हामी त्यहाँ जान्छौं जब हामीलाई प्रमुख खरीद गर्न आवश्यक पर्दछ? हुनसक्छ, हुन सक्दैन। तर हामी त्यहाँ अनुसन्धान संग सशस्त्र जानेछौं, निर्णय पहिले नै गरिएको छ, र हामी हामी चाहेको चीज प्राप्त गर्नेछौं, बरु विक्रेतालाई कुनै प्रश्न सोध्नुको सट्टा।
वा हामी केवल बेस्ट बाइमा जान्छौं। तिनीहरूले कम्तिमा सुन्नुहोस्।
टैग: सबै भन्दा राम्रो खरीदफ्राईसुन्दैसुन्ने कलाबिक्री मान्छेबिक्रीविक्रेताविक्रेता
डिसेम्बर १, २०१ 14 2009:२:1 अपराह्न
म सहमत छु। म years बर्ष अघि को समान अनुभव सम्झना गर्दछु, जब मेरो भावी पतिले मलाई सगाईको औंठीको लागि किनमेल गरे। मैले निर्णय गरेको थिएँ कि म परम्परागत हीरा त्यागीको सट्टा एक एनिवर्सरी ब्यान्डको शैली चाहान्छु। हामी एउटा जौहरीमा गयौं र एक सेल्सपर्सनले तुरुन्तै कुरो लिएको थियो। हामीले उनलाई भनेको थिएँ कि हामी व्यस्तता रिंग शपिंग र मैले खोजेको शैली। उनले त्यहाँ सम्पूर्ण समय बिताए जुन मलाई विश्वास दिलाउन कोशिस गर्दै थिए कि म एकल चाहिन्छ भनेर। म केवल कल्पना गर्न सक्छु कि मेरो श्रीमान् त्यहाँ एक्लै जानुभएको भए के हुने थियो होला, सायद केहि अधिक मूल्य चुकाउनु पर्ने थियो जुन मेरो शैली थिएन। निस्सन्देह, हामी भविष्यमा गहनाको खरीदहरूको लागि त्यस स्टोरमा फर्केका थिएनौं।
डिसेम्बर १, २०१ 14 2009:२:6 अपराह्न
राम्रो पोष्ट! बिक्री पेशेवरहरूले यस पाठलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ। यदि कसैले "खरीद सिग्नलहरू" पठाउँदै छ भने तिनीहरूलाई बिक्रीबाट टाढा नलगाउनुहोस् - बिक्री गर्नुहोस्! 😀